Akhriso Safiiradda Soomaliya Oo Ka Digay In Ay Xidhmayaan Safaaradaha Ay Ka Shaqeeyaan – Heemaal News Network
Safaaradaha Soomaaliya ee kuyaala caalamka qaarkood ayaa qarka u saaran in ay xirmaan ,kadib markii laga jartay qarashaadkii socodsiinta adeega safaaradaha (RUNNING COST) oo bil kasta la siin jiray safaaradaha .
Warqad cabasho ah oo safaaradan dhoor mar u dileen Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Soomaaliya kuna dalbanayeen in la siiyo qarashaadka adeega ee u baahan yihiin safaaradaha ayaan looga soo jawaabin.
Bajadka Dowlada oo ansixiyeen Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ku jira qarashaadka ku baxa Safaaradaha Soomaaliya ku leedahay dalka dibadiisa, lamana oga cida ay ku maqan tahay lacagahan safaaradaha xaqa u lahaayeen balse aan la siin.
Danjirayaasha iyo qunsulada lacagaha badan ka maqan yihiin ayaa hada kasii niyad jabsan xiligan kala guurka ah , waxa ayna ka cabsi qabaan in lacagihii lagu socod siin lahaa shaqooyinka safaaradaha in loo adeegsado ololaha doorashada.
Halkan ka AKhriso mid kamid ah qoraalada cabashada ee Danjirayaasha:-